Hotels: Ego njem njem azụmaahịa gbadara ijeri $ 59 na 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Hotels: Ego njem njem azụmaahịa gbadara ijeri $ 59 na 2021
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Njem azụmaahịa adịla ngwa ịlaghachi kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro. Njem azụmaahịa gụnyere ụlọ ọrụ, otu, gọọmentị na ụdị azụmahịa ndị ọzọ. A naghị atụ anya na ego njem njem azụmaahịa ga-ebute ọkwa ọrịa tupu 2024.
Industrylọ ọrụ ụlọ ọrụ na -atụ anya ịkwụsị 2021 karịa $ 59 ijeri na njem njem azụmahịa.
Industrylọ ọrụ nkwari akụ tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ijeri $ 49 na ego njem njem azụmahịa na 2020.
Njem azụmahịa bụ isi ụlọ ọrụ nkwari akụ kacha nweta ego.
A na -atụ anya na ụlọ ọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ ga -akwụsị 2021 karịa $ 59 ijeri njem njem azụmahịa ma e jiri ya tụnyere 2019, dị ka akụkọ ọhụrụ ewepụtara taa. Nke ahụ na -abịa mgbe tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ijeri $ 49 na ego njem njem azụmahịa na 2020.
Njem azụmaahịa bụ isi ụlọ ọrụ nkwari akụ kacha enweta ego ma ọ na -egbu oge ịlaghachi kemgbe ọrịa ọjọọ bidoro. Njem azụmaahịa gụnyere ụlọ ọrụ, otu, gọọmentị na ụdị azụmahịa ndị ọzọ. A naghị atụ anya na ego njem njem azụmaahịa ga-ebute ọkwa ọrịa tupu 2024.
Nyocha ọhụrụ a na-abịa n'azụ nyocha AHLA n'oge na-adịbeghị anya, nke chọpụtara na ọtụtụ ndị njem azụmahịa na-akagbu, na-ebelata ma na-eyigharị njem n'etiti ikpe COVID-19 na-ebili.
Enweghị njem azụmahịa na ihe omume nwere nnukwu mmetụta maka ọrụ, ma na -egosipụta mkpa ọ dị maka enyemaka gọọmentị etiti ezubere iche, dị ka Save Hotel Jobs Act.
A na -atụ anya na ụlọ nkwari akụ ga -akwụsị 2021 gbadata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ 500,000 ma e jiri ya tụnyere 2019. Maka mmadụ iri ọ bụla na -arụ ọrụ ozugbo na ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na -akwado ọrụ 10 ọzọ n'ime obodo, site na ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ahịa ruo na ụlọ ọrụ na -eweta nkwari akụ — nke pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 26. ọrụ ndị na-akwado ụlọ nkwari akụ nọkwa n'ihe egwu.
Chip Rogers, onye isi ala na onye isi oche nke Chip Rogers kwuru, "Ọ bụ ezie na ụfọdụ ụlọ ọrụ amalitela ịlaghachi azụ site na ọrịa na -efe efe, akụkọ a bụ ihe ncheta na -echetara anyị na ụlọ oriri na nkwari akụ na ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ ka na -agba mgba." Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ American & Lodging Association (AHLA).
“Njem azụmahịa dị oke mkpa maka ịdị adị nke ụlọ ọrụ anyị, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ na ọnwa oyi mgbe njem ntụrụndụ na -amalitekarị ịbelata. Nchegbu COVID-19 na-aga n'ihu n'etiti ndị njem ga-eme ka ihe ịma aka ndị a ka njọ. Ọ bụ ya mere na oge eruola maka Congress ịgafe onye bipartisan Chekwaa Ọrụ Oru Oche iji nyere ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ na ndị nwere obere azụmaahịa aka ịlanarị nsogbu a. ”
N'agbanyeghị na ha so na ndị kacha sie ike, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ bụ naanị akụkụ nke ụlọ ọrụ ile ọbịa na oge ntụrụndụ nke na -enwetaghị enyemaka ozugbo. Hotels na ndị ọrụ ha egosipụtala nkwụsi ike pụrụ iche n'agbanyeghị nsogbu akụ na ụba na -enwetụbeghị ụdị ya, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ nkwado n'aka Congress iji nweta mgbake zuru oke.